Pfaff အပ်ချုပ်စက်အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားရမယ့်အရာများ Taiwan မှ Pfaff အပ်ချုပ်စက်အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊
ကြေးစားထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့မှုအရည်အသွေးမြင့်မားသည့်အတိုင်း Pfaff အပ်ချုပ်စက်အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများငါတို့စက်ရုံကစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှု, ဗွေဆော်အရည်အသွေး, နှစ်ခုစလုံးအိမ်နှင့်နိုင်ငံခြားတွင်ဖောက်သည်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကြည်ဖြူ၏အခြေခံမူများပေါ်တွင်အခိုင်အမာဆိုသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာ၌သင်တို့၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမှိုကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်လာမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။
ပုံစံ - 91-011324-04/014
ဤဓားကိုထူးခြားသောနည်းလမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်.ကြီးမားသောပစ္စည်းနှင့်ဤဓါးမျိုးကိုထုတ်လုပ်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်.၉၁-011324-04 သည်ဥရောပ၌နာမည်ကြီး Pfaff အပိုပစ္စည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်.ဖိနပ် (သို့) အိတ်ထုတ်လုပ်သူတော်တော်များများကအဲဒါကိုလိုအပ်တယ်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.sewingmachineaccessories.com.tw/my/pfaff-sewing-machine-replacement-parts.html
Yamato မော်ဒယ် FD-62G အပိုပစ္စည်းများ0068184-03-00/0068121-02-00 ကျွန်ုပ်တို့သည် Flatseamer ဓားများကို ShingRay ကဲ့သို့သော flatseamer ထုတ်လုပ်သူများစွာအားထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်,Yamato,မင်္ဂလာပါ,Kingtex,Megasew,နှင့် Isamu.ကျွန်ုပ်တို့တွင်မတူညီသောကုမ္ပဏီအတွက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရှိသည်’ထုတ်ကုန်များ.အခြေခံအကျဆုံးပစ္စည်းများ၏ကြာချိန်မှာတစ်လဖြစ်သည်.အကောင်းဆုံးတစ်ခု3ပတ်ပတ်လည်သည်.ငါတို့သည်အချို့သောထုတ်လုပ်သူမှ Flatseamer အော်တိုဖြတ်စက်ထောက်ပံ့.အကောင်းဆုံးကို ShingRay မှပြုလုပ်သည်,သူတို့ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအောက်မှာ 10 နှစ်ကြာချိန်ကတိ.
အကောင်းဆုံး Pfaff အပ်ချုပ်စက်အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် Pfaff အပ်ချုပ်စက်အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူ၊ Taiwan
Yamato မော်ဒယ် VC3611 အပိုပစ္စည်းများ3110037-03-00/3110038-01-00 ကျနော်တို့ဝါယာကြိုးဖြတ်တောက်ခြင်းအားဖြင့်နှစ်ခုဓါးသွားထုတ်လုပ်သည်.ShingRay ကိုဒီလိုဓါးမျိုးတွေပေးတယ်,မင်္ဂလာပါ,နှင့် Megasew.ရွေ့လျားနေသောဓားအတွက်အရည်အသွေးမြင့်သောသံဖြူကိုရွေးချယ်သည်.ပုံသေဓားအတွက်အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းကိုရရှိနိုင်သည်.
Flat Lock စက်အစိတ်အပိုင်းများ
Yamato မော်ဒယ် VT1500 အပိုပစ္စည်းများ4301301-01-00/4301302-01-00 ဒီအပိုပစ္စည်းနှစ်ခုဟာ Yamato ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာထောက်ပံ့ခဲ့တယ်.ထိုဓားများကိုထုတ်လုပ်ရန် HSS ကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သည်.ဒီပါးလွှာသောအထည်ထုတ်ကုန်အဘို့ဖြစ်၏.ကျနော်တို့ဝါယာကြိုးဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အတူကထုတ်လုပ်ရန်.တိကျမှုသည်အလွန်မြင့်မားသည်.ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဓားအတွက်ဗန်းဖြူသံမဏိထုတ်လုပ်မှုလည်းရှိသည်.
Pfaff အပ်တစ်ချောင်းတည်းကိုအမြင့်တင်ထားတဲ့အပ်ချုပ်စက်ဓား၉၅-774855-၀၅/၉၅-774853-05 ကျွန်ုပ်တို့သည် Pfaff ဓားများကိုဂျာမနီရှိ Pfaff နှင့် Gold Wheel သို့နှစ်ပေါင်းများစွာထောက်ပံ့ခဲ့သည်.အရည်အသွေးမြင့်တင်ထားသောအပ်ချုပ်စက်ထုတ်လုပ်သူတိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှဓားများကိုအမြဲ ၀ ယ်သည်,Jumboking နှင့် Million Special အစရှိသော.
Pfaff ၈.၅ မီလီမီတာထိပ်ဖြတ်ဓား.၉၁-169395-04/002 ဤဓားကိုအလွန်ကောင်းသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြင့်ပြုလုပ်သည်.ဒီဓါးအတွက်အခြားပိုကောင်းတဲ့ပစ္စည်းမရှိဘူးလို့ငါတို့ယုံကြည်တယ်.ငါတို့သည်အမည်မသိကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်သဘောတူညီချက်တစ်ခုရပြီးပြီ.သူတို့ကဒီအရည်အသွေးမြင့်ဓါးကိုတစ်လကိုအရွက် ၂၀၀၀ ထောက်ပံ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုတယ်.
Pfaff ဖြတ်တောက်ခြင်းဓား၉၁-119444-04 ငါတို့ဒီဓားကိုဂျာမနီမှာ Pfaff ကထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်.ဒီဓားအတွက်ငါတို့ကအရမ်းကောင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးတယ်.မည်သည့် HSS မှမရှိပါ(မြန်နှုန်းမြင့်သံမဏိ)တကယ့် HSS ကိုကွေးလို့မရတဲ့အတွက်ဒီဓားကိုထုတ်လုပ်နိုင်တယ်.ငါတို့သည်ဤဓါးကိုဗီယက်နမ်၌အလွန်ကြီးမားသောဖိနပ်ထုတ်လုပ်သူအားလစဉ်ထောက်ပံ့ပေးသည်.
Pfaff ဖြတ်တောက်ခြင်းဓါး၉၁-011165-04/011 ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအပိုပစ္စည်းများကိုဥရောပရှိအချို့သောအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များသို့နှစ်ပေါင်းများစွာထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်.ဒီတစ်ခုကထူးခြားတယ်.HSS မှပြုလုပ်သောအရာကိုရှာရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ပင်.ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုပုံမှန်ပစ္စည်းဖြင့်သာ Pfaff သို့ထောက်ပံ့သည်.အော်ပရေတာအများစုသည်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကိုရှာဖွေကြသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်.
အပ်ချုပ်စက်အပ်နင့်အပေါက်လမ်းညွှန်အပ်ချုပ်စက်အပ်နင့်အပေါက်လမ်းညွှန် bartack အတွက်အပ်ချုပ်စက်အပေါက်လမ်းညွှန်များစွာရှိသည်,ပုံစံရေမြောင်း,နှင့်ခလုတ်စက်.ကျွန်ုပ်တို့သည်အပေါက်လမ်းညွှန်အတွက်အလွန်အထူးအပေါ်ယံပိုင်းကိုသုံးသည်.ကျွန်ုပ်တို့၏အပေါက်လမ်းညွှန်၏မာကျောမှုသည်မျက်နှာပြင်အလွှာပေါ်တွင် HV 1800 ဝန်းကျင်ရှိသည်.